China Pasteurizer & Sterilizer orinasa sy mpamatsy | Higee
Ny fomba samihafa amin'ny Pasteurizer na sterilizer toy ny Tunnel type pr plat sterilizer dia novolavolaina sy namboarina arakaraka ny takian'ny mpanjifa amin'ny zava-pisotro sasany.
1.Tunnel Type Pasteurizer-Spray Sterilizer
Ny fitaovana dia mandray ny fantsom-panafody rano mafana mivezivezy, ny rano mafana alohan'ny fampangatsiahana, ny rano mangatsiaka fanasitranana dingana telo na ny dingana marobe, ny fanamorana ary ny fotoana fanamafisana arakaraka ny fepetra takian'ny mpampiasa, ny fifehezana matetika, ny fanaraha-maso mandeha ho azy ary ny mandeha ho azy avo.
* Izy io dia mandray lovia rojo mahazaka polypropylene (HTPP) avo lenta ary mandray singa elektrika japoney. Ny ravina dia vita amin'ny vy vy.
* Harato plastika avo lenta miaraka amina lovia rojo, afaka miasa amin'ny hafanana avo lavalava (-98), hafanana avo lenta fohy 104 ° C;
* Boribory mivelatra amin'ny zoro boribory, misy ny fizarana mikoriana ary milamina, ary tsy miovaova ny mari-pana;
* Fampiasana feno ny teknolojia fanarenana hafanana angovo maro, fitsitsiana angovo ary fiarovana ny tontolo iainana;
* Temperature sensor Pt100, mari-pahaizana avo lenta, hatramin'ny ± 0,5 ° C;
* Fangaro mitambatra, fizotrany antonony, afaka mahazaka fitaovana isan-karazany;
* Ny hafanan'ny sterilization dia fehezin'ny efijery mikasika PLC.
* Ny fanaraha-maso fanodinana matetika ny fanodinana matetika, azo ahitsy arakaraka ny fizotry ny famokarana;
* Izy io dia miaraka amin'ny mekanika famahanana sy famoahana mandeha ho azy ireo tavoahangy PP tsy boribory, kitapo plastika, baoritra an-tampon-trano, tavoahangy fitaratra, kapoaka ary vokatra hafa, ary milamina ny tetezamita mankany amin'ny tsipika famokarana mandeha ho azy;
* Omeo serivisy fitsapana hafanana ny mpampiasa, ampiasao ny rafitra manam-pahaizana, fanaraha-maso an-tserasera ny fiovan'ny mari-pana mandritra ny fizotry ny famokarana.
* Miaraka amin'ny fifehezana mandeha ho azy ny hafanan'ny sterilization, fanitsiana tsy misy dingana amin'ny ora fanamorana:
* Ampiasao betsaka amin'ny karazana tavoahangy misy tavoahangy am-bifotsy, zava-pisotro elektrolitika, alikaola, zava-manitra ary vokatra hafa fanamafisana sy fampangatsiahana;
* Ity fitaovana ity dia azo noforonina arakaraka ny fepetra fanamorana sy ny fepetra famokarana apetraky ny mpampiasa.
2.Pasteur plate sterilizer
Ny fanamorana ny labiera dia mampiasa teknolojia 72 ° C, lanja 27PU (unit sterilization) amin'ny ankapobeny hamonoana ny masirasira sy loharanom-pahalotoana biolojika hafa amin'ny labiera, mba hitazomana ny otrikaina misy ny labiera sy ny fotoana fitehirizana maharitra eo ambanin'ny maripana ambany indrindra. Ny fametahana amin'ny pasteurization dia vita ao anatin'ny 30 segondra, mitazona ny tsiro sy ny tsiro tsara
Ny labiera volavolan-dalàna dia voan'ny press amin'ny alàlan'ny paompy amin'ny dingana teo aloha ary nalefa tany amin'ny sterilizer ho an'ny fifanakalozana preheat. Avy eo dia miditra amin'ny faritra fanaovana sterilization izy io ary hafanaina sy hafanaina amin'ny rano mafana amin'ny 75 degre Celsius. Ny làlana fahafito ambin'ny folo dia miditra amin'ny faritra mitazona amin'ny 72 ° C ho an'ny famafana ny hafanana tsy tapaka Aorian'ny fifanakalozana preheat dia ampangatsiahina amin'ny rano ranomandry 0-2 ℃. Ny fizarana fampangatsiahana ara-nofo dia alefa ambanin'ny 4 ℃ amin'ny tanky tsy misy fangarony na milina famenoana famenoana.
Teo aloha: Rafitra fitsaboana rano
Manaraka: Tsipika milina mitsivalana solika
Pasteurizer sy Sterilizer